Fifidianana filoham-pirenena: hampanao sonia ireo ho kandidà ny CFM | NewsMada
Fifidianana filoham-pirenena: hampanao sonia ireo ho kandidà ny CFM
Mihevitra ny hampanao sonia ireo ho kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena koa ny eo anivon’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy, (CFM). Tafiditra amin’ny fametrahana fitoniana eto amin’ny firenena izany, araka ny nambaran’izy ireo.
“Zava-dehibe ho an’ny firenena izany fahatoniana izany. Na amin’ny andavanandro na amin’ny fifidianana izany, indrindra ny fametrahana ny fampihavanana aty ifotony. Amin’izao fotoana izao, anisan’ny apetraky ny lalàna aminay CFM ny fampanjakana ny fahatoniana ara-politika mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana.” hoy ny filohan’ny CFM, i Maka Alphonse, momba ny fametrahana fitoniana sy ny fanaovana fampihavanam-pirenena, ny herinandro teo tetsy Anosy.
Anisan’ny hevitra voizina amin’izao fotoana izao koa ny amin’ny fanorenana ifotony. “Manome toky izahay, satria ao anatin’ny vaomiera iray eo anivon’ny CFM ny fanorenana ifotony ny firenena sy ny Repoblika. Koa handray ny andraikitray mifanandrify amin’izay izahay. Takina izy io ary tsy maintsy atao”, hoy izy.
Hihaona amin’ireo kandidà hametraka fanorenana ifotony…
Hanatona ireo kandidà izay mirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika ny CFM mba hahazoana mametraka izay resaka fanorenana ifotony izay, ary hampanao sonia ireo kandidà rehetra ireo. Satria tsy maintsy ny iray amin’izy ireo no ho voafidy ho filohan’ny Repoblika. Mba hahazoana manao fifanakalozan-kevitra nasionaly hahazoana mandinika ny tena fanorenana ifotony amin’ny saina tony sy ao anatin’ny filaminana tanteraka.
Nanomboka ny septambra: mandeha tsara ny fanondranana lavanila, 515 t 27/11/2020
Tatitry ny Cour des comptes: nasian-teny manokana ny fitantanana ny fananan-tany 27/11/2020
« Ny hiranao »: hiseho any Manazary Anjomara ny Orimbato 27/11/2020